बुटवल, १५ कात्तिक । फूलैफूलले सिङ्गारिने पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ३ का देवी वाग्लेलाई फूल फुलाउन, माला उन्न र फुलेका फूल टिपेर बजार पु¥याउन भ्याइनभ्याई छ । तिहारका लागि आवश्यक पर्ने फूल तथा माला तयार गर्न उनीसँग व्यावसायिक फूल खेतीमा लागेका अन्य महिलाहरु बिहानदेखि दिनभरि नै व्यस्त रहन्छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं १६ मधवलियामा जग्गा भाडामा लिएर वाग्लेलगायत ८ जना महिलाको समूहले तिलोत्तमा सहकदम कृषि समूह स्थापना गरेर यसवर्षदेखि एक बिघा क्षेत्रफलमा पुष्प खेती शुरु गरेका हुन् ।
समूहमा रहेका आठै जना महिला कृषि व्यवसायमा नितान्त नौलो छन् । उनीहरुलाई तिहार तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा अत्यधिक रुपमा भारतीय फूल तथा माला प्रयोग हुने र आयातित भारतीय मालाले शरीरमा लगाएका कपडासमेत बिगार्ने देखेपछि फूल खेतीको सोच आएर शुरु गरिएको वाग्ले बताउँछिन् ।
उनका अनुसार फूल खेती गर्ने योजनासहित संरचना बनाएर गत भदौमा चितवन र काठमाडौंबाट बिरुवा मगाइयो र यस वर्ष मात्र झण्डै १५ हजार बिरुवा रोप्ने काम भयो ।
हिन्दूहरुको पर्व तिहार शुरु हुन अब करिब एक साता मात्र बाँकी छ । तिहारका लागि फूल टिप्ने र माला उन्ने कामका लागि समूहका सबै महिला थप व्यस्त हुनुपरेको समूहका अध्यक्ष समेत रहेकी वाग्ले बताउँछिन् । ‘तिहार नजिकियो, भर्खरै मात्र मालाको माग आएकाले समूहका सबैजना फूल टिप्न व्यस्त छौं,’ उनले भनिन् । तिहारमा मात्रै दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० थान माला बिक्री हुने अपेक्षा उनले गरेकी छन् । मालाको मूल्य भने अहिले नै यकिन गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ । ‘हेरौं बजारको मूल्य कसरी तय हुन्छ, हामीले पनि त्यसै अनुसार मूल्य तोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
तिहारमा मात्रै लाखौंका फूल आयात गर्न भारतीय बजार पुग्ने अवस्थामा स्थानीय बाँझो जग्गामा व्यवसायिक फूल खेती थाल्नु उपयुक्त नै होला भनेर खेती शुरु गरिएको र पहिलो पटकको व्यापारलाई हेरेर भविष्यमा फूलको व्यवसायिक खेती बढाउने योजना बनाएको उनी बताउँछिन् ।
भारतबाट आएका फूलको माला अहिले बिक्री हुँदै आए पनि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिइए र उत्पादन लागत कम गर्न सकिए भारतीय फूलको बजारलाई विस्थापन गर्न सकिने द्विविधा छैन । तर, स्थानीय उत्पादनको निरन्तरता, त्यसको बजारीकरण र बढी लागत चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।
तिहारमा मात्र नभएर बुटवल, भैरहवालगायत ग्रामीण क्षेत्रमा हुने मेला, महोत्सव र कार्यक्रमहरुमा मालाको प्रयोग अत्यधिक हुने गरेकाले आफूहरुको उत्पादनले बजारमा राम्रै स्थान पाउने उनको विश्वास छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकै ड्राइभर टोलमा रहेको गुप्ता नर्सरीमा यतिबेला तिहारका लागि भनेर ढकमक्क फुलेका सयपत्री फूलका बिरुवा किन्नेको भीड नै देख्न पाइन्छ ।
गुप्ता नर्सरीले यस क्षेत्रमा व्यवसायिक नर्सरी खेती थालेको झण्डै चार दशक भन्दा बढी भयो । उक्त नर्सरीमा विभिन्न प्रजातिका सदाबहार तथा मौसमी फूल र फलफूलको व्यवसायिक खेती राम्रोसँग मौलाएको छ । उक्त नर्सरीको विभिन्न स्थानमा गरेर अहिले झण्डै ५ बिघा क्षेत्रफलमा फूल खेती हुने गरेको नर्सरीका सञ्चालक सुरेश गुप्ता बताउँछन् ।
उनको अनुभवमा तिहार तथा मेला महोत्सवका बेला मौसमी फूलहरुको अत्यधिक माग हुने गर्छ । सयपत्री, गोदावरीलगायतका फूल मात्रै हैन बिरुवासमेत राम्रै बिक्री हुने गरेको छ ।
रुपन्देही क्षेत्रमा तिहारका बेला मात्रै भारतीय बजारबाट नेपालमा लाखौं रुपैयाँको फूल तथा फूलका माला आयात हुने गरेको छ । यस बाहेक विवाह तथा मेला महोत्सवका अवसरमा सजाउनका लागि विभिन्न प्रकारका फूल तथा माला, फूलका गुच्छाहरु आयात हुने गरेको रुपन्देहीमा लामो समयदेखि नर्सरी व्यवसाय गर्दै आएका रमेश पाण्डे बताउँछन् ।
तिहारका बेला रुपन्देहीमा खपत हुने फूल र मालामध्ये स्थानीय र पाल्पा जिल्लाबाट आउनेको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । बाँकी सबै भारतीय बजारबाटै आउने गरेको उनी बताउँछन् ।
भारतीय उत्पादनमा निर्भर नेपालको फूल तथा फूलजन्य बजारलाई विस्थापन गर्न प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुष्प उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन अनुदानका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छ । अब छिट्टै नै प्रस्ताव आह्वान गरेर पुष्प खेतीमा लाग्न चाहने व्यवसायीहरुलाई छनौट गरी अनुदान वितरण गरिने प्रदेश सरकारका कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था सचिव याम नारायण देवकोटा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अनुदानका लागि छिट्टै नै प्रस्ताव माग्छौं र तिहार लगत्तै पाँच किसानलाई छनोट गरेर रु. २० लाख अनुदान वितरण गर्दैछौं ।’